Yaa hogaaminaya Gool dhalinta Horyaalka Premier League-ga? %
By Laacib News	 On Dec 31, 2018
Laacib Sports : Maalintii shalay ahayd waxaa la soo gaba gabeeyay kulamadii 20 aad ee horyaalka premier league kuwaas oo bilow u ahaa qaybta labaad ee xili ciyaareedkan. Kooxda hogaanka premier league haysa ee Liverpool ayaa xasuuq xun u geysatay Arsenal si ay 7 dhibcood ugu heyso hogaanka premier league kadib guushii ay Manchester city ka soo gaartay kooxda Southampton kulankii shalay.
Naadiga kubadda cagta Chelsea iyo Manchester United ayaa sidoo kale guulo muhiim ah ku soo xiray sanadkan 2018 iyada oo kooxaha Arsenal iyo Tottenham ay noqdeen labada kooxood ee murugo ula wareegi doona sanadka cusub ee 2019-ka kulamada sanadka.
Hadii aan eegno dhanka Gool dhalinta tartanka kooxaha waxaa barbar socda loolanka adag ee loogu jiro kabta dahabka ah ee Golden Boot taas oo aan ilaa hadda la saadaalin karin ciyaartoyga ku guulaysan doona maadaama aad la iskugu dhowyahay goolasha.
Laacib ka u dhashay dalka Masar una ciyaara Liverpool Mohamed Salah ayaa la wareegay hogaanka gool dhalinta Premier league kadib markii uu hal gool ka dhaliyay kulankii Arsenal wuxuuna yeeshay 13 gool oo uu la wadaago Aubameyang kaas oo aan wax goolal ah ka dhalin kulankii Liverpool ay la ciyaarayeen.
Ugu dambeyntii Mohamed Salah ayaa hogaanka gool dhalinta Premier league kuhaya 13 gool iyo 7 gool caawin leeyahay isla markaana uu ahaa xidigii gool dhalinta kaga danbeeyay Aubameyang oo Arsenal u ciyaara.
Dhanka kaalinta labaad Laacib ka Aubameyang ayaa haysta 13 gool wuxuuna soo sameeyay 3 gool caawin oo kaliya waxayna isku mid yihiin Harry Kane oo hal gool ka dhaliyay kulankii Wolves isla markaana haysta 3 gool caawin ah.
Kaalinta 3-aad Laacib ka Eden Hazard ayaa ah xidiga afraad ee goolasha ugu badan ka soo dhaliyay Premier league inkasta oo uu ku fashilmay in uu wax goolal ah ka dhaliyo kulankii Crystal palace laakiin waxa uu haddaba leeyahay 10 gool halka uu soo caawiyay 9 gool waxaana xusid mudan in caawinta uu aad ugu fiican yahay Eden Hazard.
Hadaba sida loo kala horeeyo halkaan ka eeg
1st Mohamed Salah- Liverpool=13 gool
2nd Aubameyang- Arsenal =13 gool
3rd Harry Kane- Tottenham 13 Gool
4th Eden Hazard- Chelsea=10 gool
5th Raheem Sterling-Man City=9 gool
BARCLAYS GOLDEN BOOT 2018Gool dhalinta Horyaalka Premier LeagueMohamed Salah